चार दशकमा कैयौंको ज्यान बचायौ, तर कोही भएनन् तिमीलाई बचाउने, अलविदा डा.देवकोटा ! – Medianp
काठमाडौँ, ५ असार । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले बिरामीहरुको सेवामा झण्डै चार दशक बढी समय खर्चिए । अन्तमा उनी आफै निको नहुने रोगले थलिएर यो संसारबाटै विदा भए । उनले सोमबार साँझ आफैले स्थापना गरेको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा साँझ ५ बजेर ३५ मिनेट जाँदा देह त्याग गरे । वि.स. २०१० साल पौष ४ गते गोरखाको पण्डित गाउँमा जन्मिएका डा.देवकोटाको ६५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
पित्त थैलीको क्यान्सरबाट ग्रसित डा.देवकोटालाई उपचारका लागि बेलायतसम्म पुर्याइएको थियो । तर उनको रोग त्यहाँ पनि निको नहुने थाहा पाएपछि गत वैशख १५ गते उनको स्वदेशमै देह त्याग गर्ने इच्छाअनुसार नेपाल फिर्ता ल्याइयो । उनका पत्नी र तीन छोरीहरु छन् । डा. देवकोटाको निधनपछि अहिले पत्नी मधु दीक्ष्ति देवकोटा, तीन छोरीहरु मेघा, वु्सुधा र मञ्जरी शोकमा डुबेका छन् ।
प्रा.डा.देवकोटाले आफ्नो चिकित्सा सेवा नेपालके जेठो अस्पतालको रुपमा लिइने वीर अस्पतालबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । भारतबाट एमबीबीएस गरेर २०३१ सालमा नेपाल फर्किएपछि उनले वीर अस्पतालको सर्जरी विभाग अन्तर्गत रही सेवा आरम्भ गरेका हुन् । अन्ततः उनले नेपालमा न्युरो सर्जरीलाई उचाइमा पु¥याउनमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनी चिकित्सा पेशामा मात्रै सिमित रहेनन् । उनी स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म भए । उनी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा कामहरुसमेत गर्न भ्याए ।
उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरे भने स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा पनि उनैले ल्याएका थिए । अहिले देशका थुप्रै जिल्लाहरुमा नागरिकहरुले स्वास्थ्य विमा गरेका छन् । त्यसको श्रेय पनि स्वर्गीय डा.देवकोटालाई नै जान्छ । पछि उनले २०६२ सालमा बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालको स्थापना गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो देह पनि त्यही अस्पतालमा त्यागे ।
उनले अन्तिम पटक २०७४ साल कात्तिक ३० गते राधिका बस्नेत नाम गरेकी एक महिलाको ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गरेका थिए । त्यसपछि भने उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्यो । र मंसिरको छ गते बेलायतको किंग्स अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भए । तर, उनको त्यहाँ उपचार हुन सकेन । उनी उपचार नहुने भन्ने थाहा पाएपछि स्वदेश फर्किने निर्णय गरे ।
उनको इच्छा अनुसार नै उनलाई गत वैशाख १५ गते नेपाल ल्याइएको थियो । अन्ततः उनको सोमबार साँझ ५ बजेर ३५ मिनेट जाँदा न्युरो अस्पतालमै निधन भयो । उनले कयौंको ज्यान बचाए । धरैको परिवारलाई खुशी दिए । तर, न उनलाई बचाउने कोही भए । न त उनको परिवारलाई खुशी दिने कोही भए ।
स्व.डा.देवकोटा सारा नेपालीले तिमीलाई सम्झि रहने छन् । अनि तिमी सबै नेपालीको ढुकटुकीमा हुने छौ । तिम्रो भौतिक शरीर हामीमाझ रहेन तर, तिमी संधै रहनै छौ । अलविदा डा.देवकोटा !
जीवन साथी फेला नपर्दा युवतीहरु मुडुलै बस्नुपर्ने